हामीलाई कल गर्नुहोस् +86-13580997100
हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् Sales@handbagcn.com
छाला काँधको झोला
क्यानभास काँधको झोला
नायलॉन काँधको झोला
घर > हाम्रोबारे
हाम्रो कम्पनीले २०१० मा डोguगुआन टियानकिन प्याकेजि Products उत्पाद कं, लिमिटेड दर्ता गर्‍यो, जसले मुख्यतया सबै प्रकारका प्याकेजिaging उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ; २०२० मा, हामी ह्यान्डब्याग व्यवसाय विकास गर्नेछौं र विभिन्न सिलाई उत्पादनहरू उत्पादन गर्न ड Dong्गगुआन यिहुआ ह्यान्डब्याग कं, लिमिटेड स्थापना गर्नेछौं; यो आवश्यकता अनुसार प्रुफिंग र विभिन्न हैंडब्याग, कस्मेटिक झोला, उपकरण बैग, पुरुष र महिलाको काँध ब्याग, आराम बैग, आदि उत्पादन को उत्पादन अनुसार अनुकूलन गर्न सकिन्छ; उच्च गुणवत्ताको साथ, उत्पादनहरू मुख्यतया यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया र अन्य स्थानहरूमा निर्यात गरिन्छ।
कारखाना संसारको निर्माण राजधानी- Dongguan मा स्थित छ। कारखानामा सबै प्रकारका उत्पादन उपकरणहरू छन्। यसले प्रारम्भिक नमूना डिजाइन र एक-स्टप सेवा प्रदान गर्दछ मध्य-अवधि खरीद र उत्पादनलाई पछि समाप्त उत्पाद ढुवानी गर्न।
उत्पादनहरू आउटडोर मनोरन्जन, पर्यटन, पर्वतारोहण, खेलकुद, बैठक अतिथि, भोज, आदि मा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हाम्रो कम्पनीसँग छ: कम्प्यूटराइज्ड DY कार, उच्च कार, स्तम्भ कार, कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई मेशीन, कागज कटर, बियर मेसिन, पंचि machine मेशीन र अन्य उत्पादन उपकरणहरू।
उत्पादनहरू दक्षिण कोरिया, जापान, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य स्थानहरूमा निर्यात गरिन्छ।
१: शक्तिशाली ह्यान्डब्याग कारखाना, मूल्य फाइदा;
२: उत्पादनहरू अनुकूलित र उत्पादन गर्न सकिन्छ;
:: गुणवत्ता आश्वासन: यदि गुणवत्ता समस्या छ भने, यसलाई मर्मत वा नि: शुल्क बनाउन सकिन्छ।
:: VIP ग्राहक बन्नुहोस् र नि: शुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्नुहोस्;
:: उद्योग अनुभवको १० बर्ष भन्दा बढीको साथ, कारखानामा ग्राहक सन्दर्भका लागि धेरै मोडेलहरू छन्।
ब्याग मर्मत सल्लाहहरू तपाईलाई थाहा छैन2021/04/30
भनिन्छ कि ब्यागहरू एक महिलाको दोस्रो प्रेमी हुन्, त्यसोभए हामीले कसरी आफ्नो "प्रेमी" लाई व्यवहार गर्नुपर्दछ? एउटा झोला खरीद गरेपछि, विशेष गरी महँगो ब्याग जुन कि उच्च मूल्यमा किनेको छ, यो ठीक मर्मत प्रविधिहरू जान्नु बढी आवश्यक छ। यदि हामी यसलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्दैनौं भने, यो चाँडै ओइलिनेछ र खस्ने......
सानो कुपनले तपाईंलाई ठाउँ बचत गर्न ब्यागहरू भण्डारण गर्न सिकाउँछ2021/04/30
कसरी झोलाहरू भण्डार गर्ने भन्ने कुरा सधैं महिलाको लागि टाउको दुखाइ रहन्छ, किनकि झोला लुगाहरू भन्दा फरक हुन्छ र फोल्ड गर्न सकिदैन, त्यसैले झोला भण्डार गर्न पर्याप्त ठाउँ चाहिन्छ। तर सबै महिलाहरु संग ब्याग भण्डारण को लागी एक आदर्श ठूलो अलमारी हुन सक्छ। आज म ब्यागहरू भण्डारण गर्न केहि सुझावहरू प्रस्तुत......
केटीको कस्मेटिक ब्यागको रहस्य2021/04/30
धेरै केटीहरू जसले छालाको हेरचाह र पोशाक मनपराउँदछन् हरबखत टाढा टाढा यात्रा गर्न गाह्रो विकल्प हुन्छ। तिनीहरू सबै प्रकारका बोतलहरू र क्यानहरू ल्याउन चाहन्छन्, र उनीहरूले सानो स्कुलब्यागलाई बाहिर लैजान पर्खन सक्दैनन्।
महिलाले कसरी झोला छान्ने?2021/04/30
पुरुषहरू घडीमा हेर्छन्, महिलाहरू झोलामा हेर्छन्! झोला प्रत्येक एमएम पोशाकको लागि आवाश्यक भएको छ, र यो पहिचान र स्वादको प्रतीक पनि हो। व्यक्तिसँग हजारौं अनुहारहरू छन्, र हजारौं विभिन्न प्रकारका प्याकेजहरू छन्। बनावट, शैली, र रंगहरू चमकदार छन्, र तीहरूको संयोजन अझ धेरै असंख्य छ। यद्यपि सबै चीजसँग केहि......
के तपाइँ कुनै प्रश्नको लागि हामीलाई परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो मूल्य र सेवा पक्कै तपाईं सन्तुष्ट हुनेछ।
न। १9,, Huancheng Street, Shimei Youyi Road, Wanjiang जिल्ला, Dongguan शहर
© प्रतिलिपि अधिकार २०२०-२०१ Dong डोgu्गगुआन यिहुआ हैंडबैग कं, लिमिटेड